YEYINTNGE(CANADA): Sunday, January 24
ကဗျာဆရာ တင်မိုး - ဆရာဂျမ်း အမှတ်တရ
ပန်းချီ-ဒီဇိုင်း ကိုမျိုး KoMyoe's3rd Anniversary of Poet U Tin Moeကဗျာဆရာ တင်မိုး - ဆရာဂျမ်း အမှတ်တရ(နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၁၉၃၃ - ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ၂၀၀၇) Summary only...
“ ကျုပ်အသိ ”
“ ကျုပ်အသိ ”အမိမြန်မာပြည်မှာ့ မိစ္ဆာစစ်ဘီလူးတွေကြီးစိုးကာကိုယ့်ပြည်သူတွေကို ပြန်နှိပ်စက်နေသေးသမျှတော့စစ်အာဏာရှင်အမြစ်ပြုတ်ဖို့ကျရာအခန်းကပါဝင်တော်လှန်နေမယ့်ကျုပ်ဟာ့တော်လှန်ရေးသမားတယောက်ပဲယုံကြည်ထားတယ် ဟေ့ အောင်ပွဲဆိုတာက တိုက်ရဲသူတွေအတွက်ပဲ့။ဇာနည်မောင်၂၄.၀၁.၂၀၁၀
24 Jan ဒိုင်ယာရီ
pdf filemicrosoft word file24 Jan Yeyintnge's Diary Summary only...
ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ က ဒေါ်စန္ဒာဝင်း ကို မိတ်ဆွေများနှင့်ကျမ္မာစွာတွေ့ မြင်ရစဉ်။သူမရဲ့ ခင်ပွန်းနှင့် သားများကို ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ မှာ အကောက်ညဏ်စဉ်က အာဏာသိမ်းဖို့ ကြံစဉ်တယ်ဆိုပြီးမတရားဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မဆလပါတီလူဟောင်းသားသမီးများကို ဦးဆောင်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ၀င်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ လည်း သတင်းရရှိပါတယ်။ ဦးနေ၀င်းသားသမီးတွေက သန်းရွှေသားသမီးတွေထက် ယဉ်ကျေးကြတယ်။ ပညာတတ်ကြတယ်လို့မဆလပါတီဝင်ဟောင်းများက ချီးကြူးလေ့ရှိကြပါတယ်။ သန်းရွှေမိသားစုကတော့ သိပ်မိုက်ရိုင်းတယ်လို့ ရင်ဖွင့်လေ့ရှိကြပါတယ်။http://komoethee.blogspot.com/2010/01/blog-post_24.html Summary only...
ကျောက်ဖြစ်သွားတဲ့ .. နှင်း (စ-ဆုံး)
http://www.naytthit.com/ မှရယူဖေါ်ပြပါသည်။ကျောက်ဖြစ်သွားတဲ့ .. နှင်းအပိုင်း(၁)ခင်လွန်းMonday, January 18, 2010 နှင်းများက ဒီဇင်ဘာ၏ ဝန်တာကိုထမ်းဆောင် ရင်း ဝန်းကျင်တခိုတွင် ဆိုင်း၍နေလေသည်။ လာမည့်လေးငါးရက်ဆိုလျှင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံ တော်၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခါသမယ (၆၂) နှစ်တာကာလသို့ ရောက်ပေဦးတော့မည်။ အ ခြားအရာများ အသာထား၍ “လွတ်လပ်ရေးနေ့” သို့ရောက်လေတိုင်း ကျနော့်တွင် မှတ်မှတ်ရရ ရှိ ခဲ့ဖူးလေသော ငယ်သူငယ်ချင်း တယောက်ကို သတိရနေမိတတ်သည်။ ထိုသို့ သတိရမိတိုင်း လည်း သူနှင့် ကျနော့် အကြားရှိခဲ့ဖူးလေသော ကတိစကားတလုံးကပါ တပါတည်း ပါလာတတ် ပါသည်။ ပြန်ပြောင်းတွေးကြည့်တော့ နှစ်ပေါင်း ၃ဝ ပင် ကျော်ခဲ့ပါပြီကော။ ယခုအချိန်၌ ကျနော့် သူငယ်ချင်း ခင်မောင်ထွန်းပင်လျှင် သည်လော က မြေမဟီ တနေရာတွင် သက်ရှိထင်ရှား ရှိ ရှိ တော့ပါလေစ။ ထို့အတူ ခင်မောင်ထွန်းကလည်း တချိန်တခါလေးများ ကျနော့်အား သတိရနေ တတ်သေးလျှင် ဘဖေငြိမ်းတယောက် ဒီကမ္ဘာလောကကြီး၌ ရှိမှ ရှိပါလေတော့အံ့ဟု တွေးမိလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။အော် .. သူငယ်ချင်း ခင်မောင်ထွန်း၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့အခါသမယကိုရောက်လေတိုင်း မင်းကိုသတိရနေ ပါသေးတယ် “လောကကြီး” ရေ။ ● (၁) ခင်မောင်ထွန်းမှာ ကျနော်နှင့် ကိုးတန်းဆယ်တန်း ၂ နှစ်ဆက်တိုက် တတန်းထဲတခုံထဲ အတူထိုင်ခဲ့ကြသည့် အတန်းဖော်သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ထဲတော့မဟုတ်။ ဝင်းတင်ဆိုသည့် ခပ်အေးအေးခပ်ငေါင်ငေါင် သူငယ်ချင်းတယောက်လည်း တခုံထဲ အတူထိုင်ကြရာတွင် ပါပါသည်။ ကျောင်းတွင် ကျောင်းသားနှင့် စာသင်ခုံမလုံလောက်၍ နှစ်ယောက်စာခုံတန်းရှည်တွင် ကျနော်တို့ သုံးဦး အတူထိုင်ကြရခြင်း ဖြစ်သည်။ဒီနေရာတွင် ထူးခြားသည်မှာ တူရာတူရာစုတတ်ကြသည့် သဘောသဘာဝကြောင့်ပေလား၊ အခြားအခြားသော အကြောင်းကြောင်း များကြောင့်ပေလားတော့မသိ။ ကျနော်တို့ သုံးဦးသားက အတွဲညီလှသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျနော်တို့ ဥပဓိများ မှာ တတန်းလုံးတွင် တော်တော်လေး မွဲတိမွဲပြာ စုတ်တိစုတ်ချာနိုင်လှခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်၍ ပြောဆိုရမည်ဆိုလျှင် တော့ ကျနော်တို့ ၉ တန်း (ဒီ) အခန်းထဲတွင် လူမွဲစာရင်းကောက်ယူမည်ဆိုပါက ကျနော်တို့သုံးဦး ရှေ့ဆုံးတန်းက စာရင်းပေါက်မည် မှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာမရှိနိုင်။ တိုတိုပြောရလျှင် ကျနော်တို့မှာ ခပ်မွဲမွဲမိသားစုများက ဆင်းသက်လာရကြောင်း ရုပ်သွင်အရရော ဝတ် စားမှု အရပါ ထင်းထင်းကြီးပေါ်လွင်လှသည်။ ကျနော်မှတ်မိသလောက် လက်သမားဆရာကြီးတဦး၏သား ခင်မောင်ထွန်း တွင် နွမ်း ဖတ်ဖတ်ကော်လံကတုံးအင်္ကျီလေးတထည်၊ မိုးပြာရောင်လွင့်လွင့် ရှပ်လက်တိုလေးတထည်တို့သာ စာသင်နှစ်တနှစ်တာလုံး ထည်လဲ ဝတ်နေရလေ့ရှိပြီး ကျနော်ကလည်း ပခုံးစွန်းတွင် ဖာရာထေးရာဗလပွနှင့် တက်ထရွန် ရှပ်လက်တိုလေးတထည်၊ အမေ့မောင် ကျနော့် ဦးလေးအကျ အကွက်စင်းအင်္ကျီလေးတထည်တို့နှင့်သာ တနှစ်တာ စခန်းသွားခဲ့ရပါသည်။ ထိုနည်းနှင်နှင် သာမန်အစိုးရဝန်ထမ်း တ ဦး၏သားဖြစ်သူ ဝင်းတင်မှာလည်း ကျနော်တို့နှင့် ပိန်မသာလိန်မသာအစားထဲကဖြစ်ပြီး သည်လိုပုံသည်လိုမျိုးနှင့် ကျနော်တို့၏ အ ထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းသားဘဝကို ခရီးနှင်ခဲ့ကြရခြင်းကို မှတ်မိနေသည်။စင်စစ် ကျနော်တို့သုံးဦးသားအနက် အသွင်တူဆုံးမှာ ခင်မောင်ထွန်းနှင့် ဝင်းတင် ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်က ပုံမှန်အားဖြင့် လူ အေးများဟု ဆိုနိုင်ပြီး စကားနည်းကြပုံချင်းတူသည်။ ဝင်းတင်စကားပြောလျှင် လေသံအေးအေးတိုးတိုးလေးပြောတတ်ပြီး ခင်မောင် ထွန်း က စကားထစ်သည်။ တော်တော်ပင် ထစ်ရှာသည်။ ဒါပေမင့် တာထွက်မှန်ပြီး အရှိန်ရသွားလျှင်တော့ ဖြောင့်သွားတော့၏။ ခင်မောင်ထွန်း စကားပြောဖို့ချီလျှင် “လောကကြီးကကွာ လောကကြီးမှာကွာ..” စသဖြင့် အစချီကာပြောလေ့ရှိရာ သူဘာပြောပြော လောကကြီးမပါဘဲ မနေတတ်။ ဒီတော့ သူ့ကိုကျနော်က “လောကကြီး” ဟု အမည်ပြောင် ပေးထားသည်။ပြောရလျှင် သူတို့နှင့်ကျနော်က အကွာကြီးကွာသည်။ ကျနော်က စကားများသော ကြွက်။ လူကလည်း သိပ်ငြိမ်ငြိမ်မနေတတ်။ ဆရာ မရှိလျှင် စာသင်ခုံကို ဒရမ်လိုသဘောထားပြီး ခေါက်လား ခေါက်နေတတ်သည်။ ဒါမှမဟုတ် သစ်သားစားပွဲခုံပေါ်တွင် ခဲတန်ချွန်သည့် ဓားဦးဖြင့် စိတ်ကူးတည့်ရာ ကနုတ်ပုံတခုခု ထွင်းကောင်း ထွင်းနေတတ်သည်။ တခါတလေ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ဆရာများမလာလျှင် တော့ ကျောင်းနံရံကို ကွန်ပါဒေါက်စူးဖြင့် ဓား ပေါက်တမ်း ကစားတော့၏။ ဆိုပါတော့၊ ခင်မောင်ထွန်းနှင့် ဝင်းတင်တို့က အငြိမ်သမား။ ကျနော်က အလှုပ်။ တော်တော်လေးကိုလှုပ်တဲ့ အလှုပ်။ ဒီတော့ ကျနော်လည်း နာမည်ပြောင်တခု ရလာသည်။ကျနော့်အမည်က “မျောက်ညို” တဲ့။ ကာတွန်းဦးအောင်ရှိန်၏ ဇာတ်ကောင်များစွာအနက် နာမည်ကျော် ဦးစိတ်တိုနဲ့ မျောက်ညို ဇာတ် ကွက်ထဲမှ ဒေါသကြီးသည့် ဦးစိတ်တို၏ ငှက်ပျောတောကို အလစ်ဝင်ဝင်ခိုးတတ်သော မျောက်တကောင်၏အမည်ကို ကျနော် ထိုက် တန်စွာ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝင်းတင် အမည်ပြောင်ကိုတော့ သဲသဲကွဲကွဲ မမှတ်မိတော့။ ● တခါသားမှာတော့ ခင်မောင်ထွန်းက စကားတခုဆိုလာသည်။“ဟေ့ မျောက်..မျောက်..မျောက်ညို၊ လောကကြီးမှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလို့မင်းထင်သလဲ” တဲ့။ထိုနေ့က ကျောင်းအစည်းအဝေးရှိ၍ အလှည့်ကျဆရာများမလာသဖြင့် ကျနော်က ဓားပေါက်တမ်း ကစားရကောင်းမလား လုပ်နေစဉ် ခင်မောင်ထွန်းက ထိုစကားကို ဆိုလာခဲ့သည်။ မှန်တာပြောရပါက ထိုအကြောင်းကို ကျနော်စိတ်မဝင်စားလှ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ကို အ လွန်တွယ်တာသည့် သူငယ်ချင်းမို့ အလိုက်သင့်ဖြစ်ရန် ကျနော် ကြိုးစားရသည်။“ အများကြီးပဲကွ၊ ငါမပြောတတ်ဘူး ”“မဟုတ်ဘူးလေ၊ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ အများကြီး ဘယ်ရှိမလဲကွ အရေးပါဆုံးကိုပြောတာ”တကယ်တော့ ထိုပြဿနာမှာ ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်သည့်ပြဿနာဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ ဖြစ်ပုံကို ကျနော် လင်းပြချင်သည်။ ကျနော်က အဆော့သန်ပြီး ဂဏှာမငြိမ်လှသော်လည်း တဖက်တွင် စာဖတ်ဝါသနာလည်း ထုံသလို ကဗျာလေးဘာလေးလည်း အရူးထပြီး ရေး သည်။ ထိုစဉ်ထဲက ကျနော်ဖတ်သည့်စာများမှာ သခင်မြသန်းတို့ ဗန်းမော်တင်အောင်တို့ ဖြစ်နေပြီ။ နားလည်လှလို့တော့မဟုတ်။ ကိုယ့်ဘဝက ခပ်မွဲမွဲဆိုတော့ ငမွဲများကို ကိုယ်စားပြုသည့်စာများကို ကျနော် ကြိုက်တတ်သည်။ ဆရာဗန်းမော် တင်အောင်၏ အည တြ ကြက်တောတို့ ငသြတို့ကို သဘောကျသည်။ တခါတခါ ကြက်တောဈာန်ဝင်နေသည့်ကျနော်က စာအုပ်ထဲကဒိုင်ကြောင်တွေ သူ တို့ကို ပြောပြတတ်၏။ ကျနော်ဖတ်ဖူးခဲ့လေသမျှ ဝတ္ထုထဲမှအလုံးတွေကို မနိုင်မနင်းအာလုပ်သွင်းကာ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဟဲဟဲ ရ လဒ်ကတော့ ဒီနှစ်ကောင်၏ လွှတ်အထင်ကြီးမှုကို ခံရခြင်း။ တခါတခါကျတော့လည်း ထိုအထင်ကြီးခံရမှုကပင် ပြဿနာဖြစ်တတ်ပြန်သည်။ ခုပင်ကြည့်။ လောကကြီးမှ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲတဲ့။ ဓားဝိဇ္ဇာလုပ်ဖို့ဟန်ပြင်နေစဉ် “လောကကြီး” က ပြဿနာရှာလေပြီ။ သူ့မျက်နှာ ပေါ်တွင်လည်း ခါတိုင်း ကျနော် မမြင်ဖူးသည့် အ ရောင်တမျိုးကို မြင်လိုက်မိ၏။ကျနော်က ကွန်ပါဒေါက်စူးချွန်ကို ခုံပေါ်တွင်တဒေါက်ဒေါက်လုပ်ရင်း “ဘာလဲ ငွေလား” ဟု ပြန်မေးတော့ ခင်မောင်ထွန်းက ခေါင်းကို လေးတွဲ့တွဲ့ ခါသည်။ မဟုတ်သေးဘူးဆိုသည့်သဘော။ ကျနော် ဘာများတတ်နိုင်ပါဦး မည်နည်း။“ဒါဆိုလဲ မင်းပဲပြောတော့လောကကြီး၊ လူ့လောကကြီးမှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ၊ ငွေမဟုတ်ရင်ဘာလဲ ”“ငွေ..ငွေ..ငွေလဲ ပါ..ပါ..ပါတော့..ပါတယ်ကွ၊ ဒါပေမဲ့ ငွေထက် ဂုဏ်..ဂုဏ်..ဂုဏ်က ပိုအရေးကြီးတယ် သိ..သိ..သိလား”သူ့မှာ အလေးအနက်တခုခုပြောချင်လာလျှင် ခုလိုပဲ ပိုထစ်ငေါ့နေလေ့ရှိရာ ကျနော်နားထောင်ရင်း မောနေသည်။ ထို့နောက်မှာတော့ သူတို့မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင်၏အထင်သေးအမြင်သေး ခံရပုံတွေ၊ မျက်နှာငယ်ရပုံတွေ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရပုံတွေကို ကျနော့်အား ပြောပြ သည်။ သူတစုံတရာသောကိစ္စနှင့် ခံစားနေရပုံပေါ်သည်။ ဒီ တော့လည်း ကျနော်က ထုံးစံအတိုင်း ကျနော်တို့ဘဝများချင်းမကွာလှပုံ ခါးသီးလှသည့် လောကဓံရိုက်ပုတ်ချက်များ ခံနေရတာချင်း တူညီပုံတွေကို ပြောပြရသည်။တကယ်လည်းမကွာခြားလှ။ သီတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက်များအတွင်း ခင်မောင်ထွန်းက သူ့ဖခင်၏ လက်သမားလုပ်ငန်းခွင်သို့ အ ကူလိုက်ရသလို ကျနော်လည်း ဦးလေးနှင့်အတူ ဈေးဆိုင်းထမ်း၍ လမ်းတကာလည် ရောင်းရသည်။ ကံဆိုးသည့်အခါများတွင် လူပျို ပေါက်ဖြစ်စ ကျနော့်မှာ အတန်းဖော်ကောင်မလေးများ၏အိမ်သို့ ဆိုက်ဆိုက်မြှိုက်မြှိုက်ကြီး ရောက်သွားတတ်ရာ မျက်နှာဘယ်လိုထား ရမှန်းမသိအောင်အရှက်ရပြီး ကျောင်းဆက်တက်ရေးကိုပင် တော်တော်အားပြန်မွေးယူရသည်။ဒါကို ကျနော်ကပြောပြတော့ ခင်မောင်ထွန်းဟူသော လောကကြီး၏မျက်နှာသည် သုန်မှုန်နေရာမှ နည်းနည်းကြည်လာ လင်းလာသ လို။ ဒါပေမင့် သူက အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွဟု လူအများနှုတ်မှာ ပြောဆိုကြသော်လည်း သူ့အဖေလို ရိုးသားစွာလက်သမားလုပ်စား သူတဦးအနေနှင့် နေရာတိုင်း အရာသွင်းခြင်းမခံရသလို အထင် အမြင်သေးမှုပါခံနေရ၍ သူဝမ်းနည်းရကြောင်းတွေ ဆက်ပြောသည်။မှတ်မှတ်ရရ ထိုနေ့က စာသင်ချိန်ဆရာများပျက်ကွက်သော်လည်း ကျနော့်မှာ ခါတိုင်းလို ဓားပေါက် မကျင့်ခဲ့ရသည့်အပြင် ခင်မောင် ထွန်း ၏ ခံစားမှုဓားပေါက်ချက်များက ရင်ထဲသို့စူးဝင်စိုက်နစ်ကာ ကျန်ရစ်ခဲ့ရလေ သည်ကို မှတ်မိနေပါသေးသည်။အော် .. လောကကြီးရေ။ သတိရမိပါသေးတော့ သူငယ်ချင်း။ ● ခင်မောင်ထွန်းခေါ် လောကကြီးအပေါ်မှတ်မိနေသေးသည့် အခြားအကြောင်းလေးတွေလည်း ကျနော့် တွင် ရှိနေသေးသည်။ကျောင်းကထိန်များရာသီတွင် ဖြစ်သည်။ အတန်းပိုင်ဆရာမက ပဒေသာပင်သီးရန် ကျောင်းသားတိုင်း ငွေနှစ်ကျပ်စီထည့်ရမည်ဟု အ မိန့်တော်ချထားခြင်းကို ခင်မောင်ထွန်းက ငြင်းဆန်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့အကြောင်းပြ ချက်က ဒီလို။ သူ့အဖေတို့ လက်သမားဆိုက်တွင် လက်သမားများစုပေါင်းကာ ဘုံကထိန်လှည့်ကြမည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့မိသားစု ဒီကထိန်ရာသီတွင် အလှူတခုလှူပြီးဖြစ်သည်။ ဒါဆို ရပြီ။ သူလည်း အဖေ့ဆိုက်ထဲသို့ လိုက်သွားရမည်။ ငွေနှစ်ကျပ်မထည့်နိုင်။ ဒါပဲ။ ကျနော်တို့ အတန်းပိုင်ဆရာမကလည်း ဆရာမပီသလှပါသည်။ ပြောပုံကကြည့်အုံး။“ နင်တို့က တော် တော်ပဲ မွဲသလား”..တဲ့။ဟား ဟား..လောကကြီးမှာ လောကကြီးဟာ..စသည်ဖြင့် ခင်မောင်ထွန်း ပြောမြဲပြောတတ်သလိုသာပြောပြီး ကျနော် ရီပစ်လိုက်ချင် သည်။ ဒါပေမင့် ကျနော်တို့ အတန်းပိုင်ဆရာမမှာ လက်မရွံ့ဂိုဏ်းသားတဦးလို ကျောင်းသားတယောက်ကိုရိုက်ရန် အခါမရွေးတတ် သူဖြစ်ရာ ကျနော် ငြိမ်ကုပ်၍သာနေလိုက်ရသည်။ သို့သော် ခင်မောင်ထွန်း တိုက်ပွဲ အောင်သွားသည်။ဆရာမကွယ်ရာရောက်တော့ ခင်မောင်ထွန်းကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ချီးကျူးစကားပြောဖြစ်၏။ ခင်မောင်ထွန်းက ဘဝဆိုတာ တိုက်ပွဲ ပဲလေကွာ နိုင်ရင်နိုင် မနိုင်ရင် ရှုံးပေါ့.. တဲ့။ ထိုစကားကိုပြောခိုက် နည်းနည်းလေးမှ ထစ်ငေါ့နေခြင်းမရှိတာကို ကျနော်မှတ်မိနေသည်။ အော် လွမ်း လွမ်းမိပါသေးတော့ လောကကြီးရေ။ ● သည်လိုနှင့်ရေစက်မကုန်သေးသည့် ခင်မောင်ထွန်းနှင့်ကျနော်သည် ဆယ်တန်း(ဘီ)အတန်းတွင် အတူဆုံကြရပြန်သည်။ ဝင်းတင် နှင့်တော့ အတန်းချင်းကွဲသွားသည်။ ဝင်းတင်က ဆယ်တန်း(ဒီ)။နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်များအတွင်း ခင်မောင်ထွန်းသည် သူ့အဖေ၏လက်သမားဆိုက်တွင် တော်တော်ကြီးကူညီခဲ့ရပုံရှိရာ နေ လောင်ထားသည့် ဒဏ်ကြောင့် နဂိုကမှညိုသောအသားမှာ မွဲခြောက် မည်းပြောင်နေသည်။ ဒါပေမင့် ယခင်ပိန်သွယ်သွယ်ကိုယ်ဟန်မှ ပိုအရပ်ထွက်လာသလို မနှစ်ကထက် ကျားကျားလျားလျားလည်း ဖြစ်လာသည်။“ ဟေ့ကောင် မျောက် မျောက် မျောက်ညို၊ မင်းအသားတွေမဲပြီး ထွားလာတယ်ကွ ”ခင်မောင်ထွန်းက ကျနော့်ကိုပြန်တွေ့တွေ့ချင်း ပြောသည့်စကား။“ ဟာ ငါကလဲ မင်းကို ဒီလိုပဲပြောမလို့၊ ဟားဟား လောကကြီးရေ ဒို့နှစ်ယောက်တိုက်ဆိုင်ပုံက တူလွန်း အားကြီးလှပါလား ဟားဟား ”“ဟား ဟား ”သူကလည်း ကျနော့်လိုလိုက်ရီသည်။ သည့်နောက်မှာတော့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သား ဝေးကွာနေခဲ့သည့် နွေကျောင်းပိတ်ရက်ရှည် အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ကြပြောကြသည်မှာ မမောနိုင် မပမ်းနိုင်အောင်ပင်။ ခင်မောင်ထွန်းက ကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း သူလည်း ကျနော့်နည်းတူ ဝတ္ထုများဖတ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖတ်တိုင်း ကျနော့်ကို သတိရမိကြောင်း၊ ကျနော်ကလည်း ဂျာနယ်တစောင်တွင် ကဗျာ တပုဒ် စတင်အဖော်ပြခံခဲ့ရ၍ ကြည်နူးမိ ကြောင်းတွေဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်တွင် ကျနော်တို့ သိသိသာသာပြောင်းလဲလာမှုမှာ ကျနော်က ဆရာလစ်လျှင် ဓားပေါက်ဝိဇ္ဇာမလုပ်တော့ဘဲ ကဗျာတွေချည်း ထိုင်ရေးမိနေတတ်သလို ခင်မောင်ထွန်းမှာလည်း မနှစ်ကနှင့်မတူ ကျောင်းစာအပေါ် ပိုမိုအလေးထားလာသည်ကို သတိထားမိသည်။သို့သော်..။ သည်သို့သော်နောက်တွင် ခင်မောင်ထွန်းတယောက် ထူးထူးခြားခြားတခုခုတော့ လုပ်လိမ့်မည်ဟု စာဖတ်သူ ထင်ပါလိမ့် မည်။ မှန်ပါ့ခင်ဗျာ။ထိုနှစ်သီတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက်များအပြီး ကျောင်းပြန်ဖွင့်သည့်အခါ အမြဲလိုခပ်နွမ်းနွမ်းခပ်ညှိုးသာ နေလေ့ရှိသည့် ခင်မောင် ထွန်း တွင် မသိမသာထူးခြားမှုလေးများ တွေ့လာရသည်။ ဆံပင်ကိုခေါင်းလိမ်းဆီမွှေး တမျိုးမျိုးလိမ်းကျံကာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖီးသင် လာခြင်းနှင့် အင်္ကျီခပ်ကောင်းကောင်းလေး နှစ်ထည်သုံးထည်ကို ပွဲထုတ်ရှိုးများလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါလည်း သိပ်ထူးလှသည်ဟု မဆို နိုင်သေး။ကျနော်မသင်္ကာသည်က နေ့စဉ်ကျောင်း တက်ခေါင်းလောင်းမထိုးမီ အခြားအတန်းများရှိရာသို့ မယောင် မလည်သွားလုပ်တတ်ခြင်း နှင့် သူ့မျက်နှာတွင် ကျနော်အမျိုးအစားမခွဲခြားတတ်သည့် အပြုံးလိုလိုဘာလိုလို မျက်နှာပေးတမျိုးကို မြင်တွေ့လာရခြင်းတို့ပင်။“ဟေ့.လောကကြီး၊ မင်းမျက်နှာကြီးက တမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ မင်းဘာဖြစ်နေလဲ မှန်မှန် ပြောစမ်း”တနေ့ အမှတ်မထင်ဗြုန်းစားကြီးမေးချလိုက်သည့်ကျနော့်စကားကြောင့် သူ ကြောင်တိကြောင်တောင် ခဏဖြစ်သွားသည်။ နောက်မှ မချိုမချဉ်မျက်နှာအဖြစ်သို့ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားကာ ...“မျောက် မျောက် မျောက်ညို မင်းငါ့ကို ကတိတခုပေး”“ငါ ပေးနိုင်မှ ပေးမယ်ကွာ မင်းလဲ ပြောချင်မှပြော”ကျနော်က ဒီလိုဈေးကိုင်လိုက်တော့လည်း လောကကြီးသည် ဘာမှဈေးဆစ်မနေတော့ဘဲ ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စဉ် ပြောပြတော့သည်။“ကဲ ထားပါတော့၊ အဲဒီ့ နီလာဆွေဆိုတဲ့ကောင်မလေးကရောကွာ မင်းအပေါ် ဘယ့်နှယ့် ..”“မင်း.. မင်း စဉ်းစားကြည့်လေ၊ ငါ..ငါ.. ငါပြောတာ အဲဒါ အမှန်..အမှန်..အမှန်တွေချည်းပဲ”လောကကြီးအဆိုအရ သီတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း သူ့ဖခင်နှင့်အတူ တိုက်တလုံးပြန်ပြင်နေ သည့်လက်သမားဆိုက်ထဲသို့ လိုက်သွားရရာ ထိုတိုက်မှာ ကျနော်တို့ကျောင်းမှ ကောင်မလေးတဦး၏ အိမ်ဖြစ်နေပြီး ကောင်မလေးမိဘများကလည်း အလွန်ဖော်ရွှေ ကြောင်း၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာသော်လည်း အဆင့်အတန်းမခွဲကြောင်း၊ နီလာဆွေဆိုသည့်ကောင်မလေးကမူ သူတို့ကိုနေ့စဉ်ပုံမှန် ကော်ဖီ ဖျော်တိုက်လေ့ရှိကြောင်း၊ ထိုမိသားစုသည် မကြာသေးမီကမှ တခြားနယ်မှပြောင်းရွှေ့လာကြသည်ဖြစ်ရာ ခင်မောင်ထွန်းအနေဖြင့် နီလာဆွေ ကို ညီမလေးလို သဘောထား၍ ကျောင်းတွင် အစစအရာရာ ကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့လည်း သူ့မိဘများကမှာကြား ကြောင်း..စသဖြင့်။“မင့်ဟာက ရုပ်ရှင်လိုလို ဝတ္ထုလိုလို”ထို့နောက် ကျနော့်ကိုမြင်ဖူးစေချင်သည်ဆို၍ နီလာဆွေတို့အတန်းဘက်သို့ လိုက်ကြည့်ရသေးသည်။ ကောင်မလေးက ခပ်မိမိခပ်ချော ချောလေးထဲကဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက တော်တော့်တော်တော် ချမ်းသာမည့်ပုံ။ ဒါပေမင့် အတန်းပြတင်းဝမှာရပ်နေသည့် ကျနော်တို့ကို ထိုကောင်မလေးပြန်ကြည့်လိုက်သည့် အကြည့်တချက်က စူးစူးစားစားနိုင်လွန်းလှသဖြင့် ကျနော်ပင် မျက်လုံးချင်း မ ဆိုင်ရဲတော့ဘဲ မျက်နှာလွှဲခဲ့ရ၏။ကျနော်တို့လှည့်ပြန်လာစဉ် ခင်မောင်ထွန်းက နီလာဆွေအပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲဟု မရမကမေးလေရာ သားသတ်သမားတဦးက မြိနေအောင်သွေးထားသည့်သူ၏ဓားသွားကို နေရောင်မှာဝင့်၍စစ်ဆေးနေစဉ် အရောင် တလက်လက်ထသွားပုံနှင့်တူလွန်းလှသည့် ထိုကောင်မလေး၏အကြည့်ကို ကျနော်ပြောမနေဖြစ်တော့ဘဲ “ အေး .. တော်တော်တော့လှတယ် ကွ ” ဟုသာ မယုတ်မလွန် ပြောလိုက်ရသည်။ ကျနော်ထင်ခဲ့သလိုပင် ကိုးတန်းတုန်းက အတန်းပိုင်ဆရာမကို ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရာ၌ အောင်ပွဲရခဲ့ဖူးသော ကျနော့်သူငယ်ချင်း လော ကကြီးတယောက် နီလာဆွေနှင့်ပွဲတွင် အရှုံးကြီးရှုံး၍ မရှုမလှအထိနာသွားခဲ့ရသည်ကိုလည်း ယခုအထိ ကျနော်မမေ့ဖျောက်နိုင်သေး။ ● ဒီလိုနှင့် မတ်လဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးက တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီဖြစ်ရာ တနေ့တော့ ခင်မောင်ထွန်းက ကျနော့်ကို တခုတောင်း ဆို လာပါသည်။“ဟာကွာ ငါ အဲ့ဒီ့ကဗျာမျိုး မရေးတတ်ဘူးကွ၊ ရေးတတ်မှဖြင့် ငါလဲ စွန်နေရောပေါ့ ”သူက ကျောင်းပိတ်ရက်တွင် ခွဲကြရတော့မည့်နီလာဆွေကိုပေးရန် ချစ်ရိပ်ချစ်ငွေ့ပါသည့် ကဗျာတပုဒ် ရေးပေးစမ်းပါဟု တောင်းဆိုလာ ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့ဟာက ရည်းစားစာလည်းမကျ သာမန်ခင်မင်မှုထက်လည်း နည်းနည်းပိုပြင်းသည့် အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ရမည်ဆိုတော့ ကျနော်လည်း မလုပ်တတ်တော့။“မင်းရေးတတ်သလို ရေးကွာ၊ ကျောင်း..ကျောင်းပိတ်တော့ ဒို့တွေ ခွဲရတော့မယ်၊ မင်း..မင်းနဲ့ ငါ.. ငါလဲ ခွဲရမယ်၊ လွမ်း..လွမ်းစရာကြီး လေ၊ အဲဒါမျိုးရေး၊ ဟို..ဟို..ငါပြောချင်တာက ချစ်တာတို့ဘာတို့ မဟုတ်ဘူး၊ ငါ..ငါ ပြောတာ မင်းသိမှာပါ ”ခင်မောင်ထွန်းက တဂျီဂျီပူဆာသည်။ ကျနော်က ဂျာနယ်တစောင်၏စာမျက်နှာပေါ်တွင် ကဗျာတပုဒ် လောလောလတ်လတ်ပါထား သူမဟုတ်လား။ စင်စစ် ကျနော်ကိုယ်၌မှာလည်း အလွမ်းဓာတ်၏ လွှမ်းပတ်ပြုစားမှုကို ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားနေရပြီဟု ဆိုနိုင် သည်။ကျောင်းရှေ့ ကုက္ကိုပင်ကြီးမှရွက်ဝါတို့သည် လေမှာဝဲ၍ တဖွေ့ဖွေ့ ကြွေကျနေကြ၏။ ကျောင်းရှေ့မျက်နှာစာမှ စွယ်တော်ပင်နှင့် စိန် ပန်းများပြွန်းရာ ငုဝါပင်တို့မှာလည်း အဝါရောင်လင်းလင်းနှင့် အပြိုင်းအရိုင်းပွင့်ချေပြီ ဖြစ်ရာ သစ်ရွက်လှုပ်သည်နှင့် ရင်ခုန်တတ်သော ကျနော်တို့လိုအရွယ်များအဖို့ အဝါရောင်လွမ်းလိပ်ပြာတို့ တမင်စေလွှတ်နေသည့်အလား ထင်မှားခံစားနေမိသည်။ ကျောင်း၏အလျား အတိုင်းရှိနေသည့် မြေနီနီလမ်းကလေးသည်လည်း ဝင်းဝါသောနေရောင်အောက်တွင် ဖုန်အလိမ်းလိမ်းထလျက်က သူ့ကျောရိုးအပေါ် နင်းလျှောက်လာကြ သည့် ကျနော်တို့ကျောင်းသားများ၏ခြေအစုံစုံကို လွမ်းမောစွာငံ့လင့်ရင်း ကျန်ရစ်ရရှာပေတော့မည်။ကျနော့်နှလုံးသားအစုံမှာလည်း ကျောင်းပတ်ပတ်လည်ဝန်းခတ်ထားသည့် သံဆူးကြိုး၏တနေရာတွင် ချိတ်ငြိတွယ်လျက် ကျန်ရစ်နေ ပေတော့မည်လော။ အတန်းထဲသို့ဝင်လာသည့် ဆရာဆရာမတို့အား မင်္ဂလာပါဟု သံပြိုင်ကြိုနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်သံသည် ကျနော့် ရင်ထဲတွင် ဟိန်းထပဲ့တင်နေတော့၏။ ကျောင်းအတက်အဆင်း ထိုးလိုက်သည့် ခေါင်းလောင်းသံချိုလွင်လွင်မှာလည်း အဆွေးဓာတ်ကို ဆောင်ကြဉ်းလာသည့် မှော်ဒြပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းကာ ကျနော့်သွေးကြောထဲအထိတိုင် တမြေ့မြေ့ချင်း စီးနစ် ဝင်နေခဲ့လေပြီ။စာမေးပွဲရာသီကုန်ဆုံးချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့၏ငယ်ဘဝပုံရိပ်များဖြင့် လွှမ်းထုံနေတော့သည့် ချစ်လှစွာသော ထိုကျောင်းတော်ကြီး သည် ဝင်းတံခါးပိတ်ကာ ဟင်းလင်းဟာလာဗလာကျင်းလျက် ဆိတ်ငြိမ်တိတ်ဆိတ် ခြောက်သွေ့စွာ ထီးထီးကျန်နေရစ်ပေတော့မည် တကား။ အို .. လွမ်းစွ။ ဒီလိုနှင့် ထိုရက်များအတွင်း ကျနော်ကဗျာတပုဒ်ရေးဖြစ်သွားပြီး လောကကြီးကို ပထမဆုံးပေးဖတ်လိုက်သည်။ သူသုံးလိုက သုံးရန်။ ကဗျာက .. “ စွယ် တော် အ လွမ်း ”ခေါင်းလောင်းသံတိတ်သော့အိမ်ချိတ်လို့ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည် နီးပြီကွယ်စွယ်တော်ပမာ၊ ရွက်နှစ်လွှာလိုယှက်ဖြာပေါင်းစု၊ သမုဒယမေတ္တာတွယ်တာခုံမင်၊ ချစ်ခင်စုံမက်နှောင်တည်းဘက်ခြင်း၊ ကွေကွင်း ခွဲခွာကျောင်းပိတ်မှာလေ နွေ နွေ နွေ...အော် နွေပြဿဒါး၊ ရက်များစိမ်းသက်ကျောင်းရက်ရှည်ဝေး၊ ရင်သိမ့်ဆွေး၏ခက်သေးပါဘိ အို နွေရယ်..ကျောင်းရက်ရှည်ဝေး၊ ဆုံလိုသေးလည်းချိုတေးတုံးတိ၊ ပြတ်တောင်းဘိသည်ခက်သေးပါ၏ အို နွေရယ်အို .. နွေပြဿဒါး၊ ရက်များလုယက်ကျောင်းတက်လိုသေးခက်သေးတော့တယ် အိုနွေရယ်။ ထိုကဗျာမှာ ကျနော်ငယ်ရည်ငယ်သွေးဘဝက တကယ်ပင်ရေးခဲ့သည့်ကဗျာလေးဖြစ်ရာ ခုနေအခါကဗျာ များနှင့်နှိုင်းစာလျှင် ပုံစံ ဟောင်းကြီးဖြစ်နေပြီး အားနည်းကောင်း နည်းနေပါမည်။ ထားပါ။ကဗျာကို ခင်မောင်ထွန်းကိုပေးဖတ်တော့ “မင်းဟာက သူနဲ့တွေ့ချင်သေးရင် စာမေးပွဲပဲကျရမလိုပါလားကွာ” ဟု ဆိုသေးသော်လည်း သူ့စာအုပ်တနေရာတွင် ကူးယူထားသည်ကိုတော့ ကျနော်မြင်လိုက်၏။ကျနော်လွမ်းလိုက်သော စွယ်တော်အလွမ်းက ဒီမှာတွင် စခန်းရပ်သွားသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့အတန်းပိုင် ဆရာမဒေါ်ခင်သန်းဝင်း လက်ထဲသို့ပင် ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်သွားခဲ့လေပြီ။ ဖြစ်ပုံက ကျနော့်ဆီမှ ခင်မောင်ထွန်း၊ ခင်မောင်ထွန်းဆီမှ ဆယ်တန်း(အေ) က သူ့ကောင်မလေး နီလာဆွေထံ။ ထိုမှတခါ ကျနော်တို့ အတန်းပိုင်ဆရာမဆီ။ ထိုသို့ အဆင့်ဆင့်ရောက်လာခြင်း။“မောင်ခင်မောင်ထွန်း၊ အတန်းရှေ့ကို ခဏထွက်ခဲ့ပါအုံး”တနေ့သား ကျောင်းတက်ခါစမှာပင် အတန်းပိုင်ဆရာမ ဒေါ်ခင်သန်းဝင်းက ခင်မောင်ထွန်းကို အတန်းရှေ့ထွက်လာရန် ခေါ်လိုက်၏။ ပထမတော့ သာမန်ကိစ္စဟုသာ ကျနော်ထင်လိုက်မိသော်လည်း နောက်တော့မှ ကျနော့်ပယောဂပါ မကင်းသည့်ပြဿနာမှန်း သိလိုက် ရ၍ ငါ့ကိုများ အမှုလာပတ်နေဦးမလားဟု တထိတ်ထိတ် တွေးကာ စိုးရိမ်နေမိလေသည်။“ကဲ မောင်ခင်မောင်ထွန်းက ဟောဒီ့ကဗျာလေးကို တတန်းလုံးကြားအောင်ဖတ်ပြလိုက်ပါအုံး”စာဖတ်သူများခင်ဗျာ။ စဉ်းစားသာကြည့်ကြပါတော့၊ နဂိုကမှစကားထစ်ရသည့် လောကကြီးတယောက် အပ်ကျသံကြားရလောက် အောင် တိတ်နေသည့် အတန်းရှေ့သို့ထွက်ကာ ကျနော့်ကဗျာကို ဖတ်ပြရရှာသည်မှာ ဘယ်လောက်ဝဋ်ဒုက္ခ ကြီးလိုက်ပါမည်နည်း။ ကျနော်ရေးမပြရက်တော့ပါ။ကဗျာဖတ်ပြီးသွားစဉ်မှာတော့ ခင်မောင်ထွန်းကို ဆရာမက နှစ်ကိုယ်ကြားအဖြစ် တော်တော်ရှည်ရှည် ဝေးဝေးတွေ ပြောနေပါသေး သည်။ ကျနော်မကြည့်ရက်ရက်ကြည့်မိတော့ လက်ကိုပိုက်ခေါင်းကိုငုံ့ကာရပ်နေသည့် ကျနော့်သူငယ်ချင်း လောကကြီးခေါ် ခင်မောင် ထွန်း တယောက် မျက်ရည်စီးထွေ ကျလျက်ပါတည်း။“ ငါ .. ငါ.. ရှက် ..ရှက် ရှက်လိုက်တာ မျောက်ညိုရာ၊ ဆရာမက ငါ့ ငါ့ကို ...”ကျနော်တို့အတန်းပိုင်ဆရာမသည် စာအသင်အပြကောင်းသလို ကျောင်းသားများအပေါ် နားလည်မှုပေးလျက် မေတ္တာဖြင့်ချိုသာ သိမ် မွေ့စွာဆက်ဆံလေ့ရှိသော ဆရာတပါးဖြစ်ရာ ခင်မောင်ထွန်းကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ပုံကလည်း အင်မတန်လှပသည်ဟု ကျနော်ထင်ပါ သည်။ ထိုအသက် ထိုအရွယ်၌ဖြစ်တတ်သော သဘာဝတရားကိုလည်း ဆရာမကောင်းစွာ သဘောပေါက်ပုံရသည်။ စိတ်ကစားတတ် ကြသည့် အရွယ်များမဟုတ်လား။“ငါ့.. ငါ့ကို စာကြိုးစားတဲ့၊ အခုဖြစ်ခဲ့တာတွေ မေ့..မေ့..မေ့လိုက်တဲ့။ ကိုယ့်မိဘ ကိုယ့်ဘဝကို နားလည်ရင် ပြင်.ပြင်.ပညာတတ် ဖြစ်အောင်၊ မိဘအတွက်ရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အတွက်ပါ ဂုဏ် ဂုဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်အောင် ကြိုးစားတဲ့၊ စိတ်..စိတ်.မလေတော့ဘဲ ခုထဲ ကကြိုးစားရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ ” “ ဒါနဲ့ မင်းက ဘာလို့ ငိုနေရတာလဲ၊ နှာရေတွေလဲ ထွက်လို့”“ ဟာ ငါ ငါလဲ ဝမ်း ..ဝမ်း ဝမ်းနည်းသွားတာပေါ့ကွ၊ ရှက် ရှက်လိုက်တာလဲ အလွန်ပဲ”“ ဒါနဲ့ ငါ့ကဗျာလေးကိုရော ဆရာမက ဘာပြောသေးလဲ”ကျနော်က သူ့ကိစ္စထဲမှ ကိုယ့်အတွက်လည်း အမြတ်ရှာရသေး၏။“ က. က. ကဗျာလေးက ငါရေးတာလားတဲ့၊ ကောင်း..ကောင်းသားပဲ၊ သိမ်းထားတဲ့”“ အားပါးပျော်စရာကြီး၊ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာလောကကြီးရာ မင်းမျက်ရည်ကျရကျိုးနပ်သဟ”ကျနော်က ဆရာမစကားကြားရ၍ပျော်နေသော်လည်း လောကကြီးကမူ မျက်နှာလေးငယ်နေမြဲဖြစ်ရာ “ဒီကိစ္စတွေ မေ့လိုက်ပါတော့ ကွာ” ဟု ကျနော်နှစ်သိမ့်လိုက်သေးသည်။ သူက “ ဆရာမပြောတဲ့အထဲမှာ ငါဟာ လက်သမားသားတဲ့။ ငါမို့လို့ သူ့ကိုမှန်းရက်တယ်လို့ နီလာဆွေက ဆိုသတဲ့၊ ငါ ငါ ရှက် ရှက် ရှက်လိုက်တာမှ အရမ်းပဲ ” ဟုဆိုလျက် မျက်နှာလေး ညှိုးမြဲ ညှိုးနေသည်။“ဒီမှာခင်မောင်ထွန်း၊ လောကကြီးမှာ မင်းတခါပြောသလို ဂုဏ်က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ငါလက်ခံ သွားပြီ။ ပြီးတော့ ဒီစကားကလဲ ဆရာမက မင်းကိုစာကြိုးစားစေချင်လို့ တမင်ထည့်ပြောတာမျိုး ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ၊ ကဲ သူငယ်ချင်း ဒါတွေမေ့လိုက်တော့၊ မင်းတို့ငါတို့ ဘဝက ဂုဏ်မဲ့ငွေမဲ့တွေမဟုတ်လား၊ ဒီအဖြစ်မျိုးက ကျွတ်အောင် ဒို့တွေ ကြိုးစားကြတာပေါ့လောကကြီးရာ၊ နော်ကွာသူငယ်ချင်း ”ဤသည်ကား ကျနော်နှင့် ဘဝအခြေချင်းမကွာခြားလှသည့် လက်သမားဆရာကြီးတဦး၏သား ကျနော့် သူငယ်ချင်း ခင်မောင်ထွန်း ခေါ် လောကကြီး၏ ရင်နင့်ခါးသီးဖွယ်သော အရှုံးပွဲပါတည်း။သူ့စကားနှင့်ဆိုလျှင်တော့ လောကကြီးကား ဂုဏ်ပကာသနတို့သာလျှင် အခရာပါတကား။ ●သည်လိုနှင့် စာမေးပွဲဖြေဖို့ရက်မှာ နီးသထက်နီးလာရာ ကျောင်းတွေပိတ်တော့မည့်ကာလသို့ ရောက်လာခဲ့ချေပြီ။ ကျနော်တို့ကိုယ်စီ၏ စိတ်ထဲတွင် စာမေးပွဲတစ္ဆေနှင့်အတူ အလွမ်းဓာတ်က ပို၍ပို၍ ရစ်ပတ်ချည်နှောင် လာနေသည်။ ဒီနှစ်ကို ဘဝ၏အဆုံးအဖြတ်နှစ်ဟု လည်း မြင်နေသည်။ စာမေးပွဲကျ၍ နောင်တနှစ်ကျောင်း ပြန်တက်ရသည့်တိုင် ဒီဆရာ၊ ဒီဆရာမ ဒီသူငယ်ချင်းတွေနှင့် ဆုံကောင်းမှ ဆုံရပေတော့မည်။ (ဖွဟဲ့ လွဲစေဖယ်စေ)ထိုအလွမ်းကိုဆယ်သောအရာကား အမှတ်တရအော်တိုစာအုပ်လေးများဖြစ်ပြီး တဦးနှင့်တဦး အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးသားကာ အ လွမ်းသယ်ခဲ့ကြသည်၊ စိတ်ကူးယဉ်တတ်လွမ်းတတ်နေပြီဖြစ်သည့် ကျနော်တို့မှာ စာအုပ်ကောင်းကောင်းလေးများမဝယ်နိုင်သည့်တိုင် ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်လေးကိုပင် ကောင်းနိုးရာရာအဖုံး လေးများရှာကြံဖုံး၍ အော်တိုစာအုပ်လေးအဖြစ် ဖန်တီးကြရသည်။ ထိုအ ထဲတွင် ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လည်း ပါ သည်ပေါ့။ထိုအော်တိုစာအုပ်လေးများတွင် တတန်းတည်းသားချင်း တကယ်ခင်ခင်မခင်ခင် တကယ်ခင်ကြောင်း၊ သတိရနေမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ ပါပြီး နောင်တချိန်ချိန် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါက မာနမကြီးကြေး ဆိုတာမျိုးတွေပါသည့်အပြင် ရည်ရွယ်ချက်မှန်သမျှအောင်မြင်ပါစေ ဆိုသည့် ဆုတောင်းမျိုးပါ ထည့်ရေးကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာပဲပြောပြော ဟုတ်သော်ရှိမဟုတ်သော်ရှိ ပျော်ဖို့လွမ်းဖို့တော့ အကောင်း သား။လောကကြီး၏စာအုပ်မှာတော့ ကျနော်က မင်းကို ငါတသက်မမေ့ ဟု ခပ်တိုတိုရေးကာ ကျနော်တို့နှစ်ဦး ကြားရာဇဝင်ရှိခဲ့လေသည့် “စွယ်တော်အလွမ်း”ကဗျာကိုပင် တမင်ကျင့်ထားသော ကဗျာဆန်ဆန်လက်ရေးဖြင့် ရေးပြီး လက်မှတ်ပါ ထိုးပေးလိုက်သည်။“ ကဲ ငါ့အတွက်လဲ မင်း တခုခုရေးပေးအုံးလောကကြီး၊ မင်းကြိုက်တာသာ ရေး ”အော်တိုစာအုပ်များသမိုင်းတွင် ရှိခဲ့ဖူးလေသလားတော့မသိ။ လောကကြီးက “ငါ့ကို ဒီည မင်းစာအုပ် ပေးလိုက်ကွာ၊ ညကျမှ ငါစဉ်း စားပြီးရေးပေးမယ်” ဆို၍ ကျနော် ပေးလိုက်ရသည်။နောက်နေ့ကျတော့ သူ့စာကို သည်သို့ ကျနော်ဖတ်ရ၏။“ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း မျောက်ညို ”ငါ တညလုံးအိပ်မပျော်ဘဲ ဒီစာကိုရေးလိုက်တယ်၊ မင်းနဲ့ခွဲကြရတော့မှာ မကြာခင်ပဲလို့သိနေရတော့ ငါလွမ်းလိုက်တာကွာ။ ငါအဖြစ် ချင်ဆုံးဆန္ဒတခုကို ငါရေးလိုက်တယ်။ ဒါကတော့ နောင်လာမယ့် နှစ် ၂ဝ လောက် မှာ ငါတို့အသက်တွေ ၄ဝ နီးပါးရှိမှာပေါ့။ ဒီအချိန် မှာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းနဲ့ငါ တခါ ပြန်ဆုံချင်တယ်။ ဒို့တွေ ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် ဘယ်နေရာကိုရောက် ရောက်နေပါစေ တခါ လောက် ပြန်ဆုံချင်တယ်ကွာ။ စိတ်ကူးယဉ်လိုက်တာလို့ မင်းထင်မှာပါသူငယ်ချင်း။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ့ဘဝမှာ ဘယ်လိုမှမမေ့နိုင်တဲ့ ချစ် သူငယ်ချင်းတယောက်ကို ငါပြန်ဆုံနိုင်ဖို့ မင်းလဲ ကြိုးစားမယ်လို့ ငါယုံနေပါတယ်။ဒီတော့ အနှစ်၂ဝ ပြည့်မယ့် ၁၉၉၅-ခုနှစ်၊ မှတ်ရလွယ်တဲ့ ဇန်နဝါရီလ(၄)ရက်နေ့မှာ ဆုံရလွယ်တဲ့ မဟာ ဗန္ဓုလပန်းခြံရှိရာကို မနက် ၁ဝ နာရီတိတိ မရောက်ရောက်အောင်လာခဲ့ပါလို့ ငါတောင်းဆိုပါတယ်သူငယ်ချင်း။ ငါကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒီ့နေ့အဲဒီ့အချိန်ကို မရောက်ရောက် အောင်လာခဲ့ပါ့မယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်သူငယ်ချင်း။မင်းကိုချစ်တဲ့ မင်းသူငယ်ချင်း ...ခင်မောင်ထွန်း (သို့မဟုတ်) လောကကြီး၅.၃.၁၉၇၅ပင်ကိုယ်လက်ရေးဝိုင်းစက်စက်မှာ မှင်စိမ်းဖြင့်ရေးထားသည့်သူ့စာကိုဖတ်ရင်း ကျနော်ပင် လွမ်းမောမိ သလိုလိုဖြစ်ခဲ့ရကာ တော်တော် နှင့် စကားမပြန်နိုင်ခဲ့။ သူကဘေးမှာထိုင်ရင်းက “မျောက်ညို ငါ ငါ ငါ တကယ်ပြော တာကွ၊ ငါ မင်း မင်းကို အသက် ၄ဝ လောက်မှာ ပြန်တွေ့ချင်သေးတယ်ကွာ။ ၄ဝ မှ ဘဝစတယ်လို့ဆိုတယ် မဟုတ်လား” ဟု ပြော၏။ ကျနော် သူ့မျက်နှာကိုကြည့်မိတော့ သူ့မျက်လုံး အိမ်မှာ မျက်ရည်စိုစို သီသီဝေ့လျက်။“ကဲပါကွာ ဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့၊ နောက်အနှစ် ၂ဝ ဟုတ်လား၊ ငါ မင်းပြောသလို ဆက်ဆက်လာခဲ့မယ် ကွာ၊ ခုတော့ စာမေးပွဲအတွက်ပဲ ဒို့ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့၊ ဟိုမှာကြည့်စမ်း၊ စိန်ပန်းပင်တွေ ပွင့်တော့မယ်တွေ့လား၊ ဒါ စာမေးပွဲဖြေရတော့မယ့်နိမိတ်ပဲ၊ ခုချိန်ကစပြီး ဒို့ပြင် ဆင်ကြစို့”ကျနော်က ကျောင်းခြံစည်းရိုးရှိ စိမ်းရင့်ခက်ဖြာရာမှ ရဲရဲနီနီပွင့်လေတော့မည့် စိန်ပန်းပင်တန်းရှိရာသို့ သူ့ကိုထိုးပြကာအားတင်းပေး လိုက်တော့ ခင်မောင်ထွန်း၏လောကသည် ရဲရင့်မှန်ကန်ခြင်းဆီသို့ ရောက်သည်ထင်၏။ ထိုနှစ်က ရူပသင်္ချာနှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် ဆယ်တန်းတည်းဟူသောနက်ရှိုင်းလှသည့် ဂမ္ဘီရ ချောက်ကမ်းပါးကြီးကို အောင်မြင်စွာ သူကျော်လွှားသွားနိုင်ခဲ့ပါလေသည်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမည်... ခင်လွန်း စာဖတ်သူများသို့...စာရေးသူရဲ့ငယ်ဘဝပုံရိပ် တစေ့တစောင်းလှစ်ပြတဲ့အနေနဲ့ရော ငယ်သူငယ်ချင်းတယောက်ကို သတိရခြင်းများနဲ့ပါ ဒီစာကို ရေးဖြစ်ပါ တယ်။ဒီဝတ္ထုကိုရေးဖြစ်တော့ လွတ်လပ်ရေးနေ့မတိုင်မီကပါ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့အမီ စာဖတ်သူများဆီ ကျနော် ပို့ပေးချင်တာလေ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေနဲ့နောက်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝတ္ထုက အကန့်အသတ်ဘောင်ကိုလွှတ်ပြီးရေးထားတော့ ပြည်တွင်းမှာတုန်းကဆို မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည် လောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘလော့တို့ဝက်ဘ်တို့ရေစီးမှာ “ ကျနော့်ရဲ့ နှင်း ” က အတော်ကို ကိုးလိုးကန့်လန့် ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် သတိထားမိပါတယ်။ ခက်တာက ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တော့အောင် လက်ကျွံသွားခဲ့ ရပါပြီ။ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်ရတော့ မှာပါ။ကိုယ်ရေးဖြစ်တဲ့စာလေးတွေ တစုတစည်းတည်းဖြစ်ချင်တာနဲ့ပဲ ဘလော့ပေါ်တင်ရလိုက်ရတာကို နားလည်ပေးကြပါလို့ပဲ ဆိုပါရစေ တော့ဗျာ။ ဝတ္ထုခေါင်းစည်းအတွက် ကူပေးတဲ့ “နေနေ” ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ရကြောင်း ထည့်ပြောပါရစေ။ စာရေးသူကျောက်ဖြစ်သွားတဲ့ .. နှင်းအပိုင်း(၂)ခင်လွန်းThursday, January 21, 2010 နှစ်လရာသီ နာရီရထားသည်ကား သူ့ခရီးစဉ်အ တိုင်း မှန်မှန်ကြီး ချီတက်မောင်းနှင်မြဲ မောင်းနှင် နေရာ ၉ဝ ခုများသို့ပင် စွန်းခဲ့ချေပြီ။ ကာလ ယန္တရားကြီးသည်လည်း ကျနော်တို့ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီကို တူရာတန်ရာ ဘဝဇာတ်ခုံအသီးသီး သို့ သူ့မှာ တာဝန်မကင်းလေသည့်နှယ် တွန်း တင်ပို့ခဲ့လေပြီ။ ကျနော်ပင် စာရေးသူတပိုင်း အယ်ဒီတာတပိုင်းဘဝဖြင့် မိမိစိတ်နှလုံးသား မွေ့ ပျော်ရာ စာပေနယ်တွင် နစ်မျောနေခဲ့ရာ နှစ်အ တန်ကြာရှိခဲ့ပြီ။ တနေ့မှာတော့ မင်္ဂလာဒုံဘက်ရှိ စာရေးဆရာ တဦးနှင့်တွေ့ရန်အသွား မင်္ဂလာဒုံဈေးတွင် “ဟေ့ ကောင် မျောက်ညို ဘဖေငြိမ်း” ဆိုသည့် ခေါ် သံကြောင့်လှည့်ကြည့်ဖြစ်ရာ လေတပ်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံနှင့် လူတယောက်။“ဟာ ဝင်းတင်၊ သူငယ်ချင်း ”ကျနော် သူ့ရှေ့မှဖြတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း တပ်ယူနီဖောင်းနှင့်ဖြစ်နေ၍ သတိမထားမိခဲ့။ ရှစ်လေး လုံးအရေးတော်ပုံကြီးပြီးစ ပူပူ နွေးနွေးကာလမို့ ယူနီဖောင်းဝတ်မှန်သမျှနှင့် ဝေးဝေးမှနေချင်ရာ သူ့ကိုသတိမထားမိခဲ့ခြင်းဖြစ်မည်။ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား နီးရာကဖေးဆိုင်လေးတွင် ခဏတာဝင်ထိုင်ဖြစ်ကြရင်း ကိုယ့်အကြောင်း သူ့အကြောင်းတွေပြောကြရာမှ လော ကကြီးခေါ် ခင်မောင်ထွန်း အကြောင်းလည်းပါလာသည်။ တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန် ဖြစ်နေသည့် ခင်မောင်ထွန်းက ရန်ကုန်တဖက်ကမ်းမြို့တ မြို့တွင် အိမ်ထောင်ရက်သားကျလျက် အခြေကျနေပြီဆို တာလောက်တော့ ကျနော်တို့သိသည်။“မင်းနဲ့ရော အဆက်အသွယ်ရှိသေးလား” ဟု ဝင်းတင်ကမေးတော့ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ ဖြေအပြီး ခင်မောင်ထွန်းနှင့် ကျနော်တို့ အပြန်အလှန်အိမ်လိုက်လည်ခဲ့ကြပုံ၊ ကျောင်းပိတ်ပြီးနောက် သုံးလေးလ လောက်အထိလည်း ကျနော့်ဆီ စာအဆက်မ ပြတ်ရေးခဲ့ပုံနှင့် တိမွေးကုတက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်မှာလည်း ကျဲကျဲ တခါ စာရေးလေ့ရှိသည်တို့ကို ပြောပြဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတော့ အဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်သွားသည်။“ငါ့ဆီစာလာတိုင်း သူ တက္ကသိုလ်တက်ရတာ တော်တော်ခက်ခဲတာတို့၊ သူ့အဖေက ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ကြားကနေ သူ့ကို ဘွဲ့မ ရရအောင်ကြိုးစားခိုင်းတယ် ဆိုတာတို့၊ ကျောင်းမှာ ငွေကြေးချို့ချို့တဲ့တဲ့နဲ့ သူမျက်နှာငယ်ရတာတို့၊ တကယ်တော့ ဒီပညာတွေတတ် မြောက်ဖို့သင်ယူနိုင်တဲ့ လူတန်းစားက ငါတို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတို့၊ ဒါတောင် ဆေးကျောင်းများအမှတ်မီရင် သူတက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတို့၊ စုံနေတာပါပဲကွာ၊ ဒါတွေဟာ စနစ်ကြီးတခုလုံးရဲ့ အားနည်းချက်ပဲ၊ ပညာရပ်တိုင်းကို လူတကာသင်နိုင်ရမယ်တဲ့။ သူငါ့ဆီ တရားလှမ်းလှမ်း ဟောနေသေးတာ ”ဝင်းတင်က ကျနော့်စကားဆုံးတော့ ပြုံးထေ့ထေ့လုပ်ကာ “မင်းငယ်ငယ်ကပြောခဲ့တဲ့ဒိုင်ကြောင်တွေနဲ့ မင်းကို တရားပြန်ဟောတာ နေ မှာပေါ့၊ တကယ်လဲ သူက ဘဝနာတယ်လေကွာ၊ ဒို့တွေ ဘာထူးလဲ” ဟု ဆိုသည်။“ဒါနဲ့မင်းနဲ့ရော ထပ်တွေ့သေးလား”ဟုမေးတော့ ဝင်းတင်က သူနှင့်လည်းမတွေ့တာကြာပြီဖြစ်ကြောင်း“ဒီလိုပဲကွာ၊ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်လမ်းနဲ့ကိုယ် လျှောက်နေကြရတာပဲသူငယ်ချင်း” ဟုပြောသည်။ ဝင်းတင်မှာ ကလေးနှစ်ယောက်ဖခင်ပင် ဖြစ်နေပြီ။ စစ်တပ်ကထွက်လိုသော်လည်း ထွက်ခွင့်မရ၍ စိတ်ပျက်မိကြောင်း ညည်းပြော လေးလည်း ပြောသွားသေးသည်။ခွဲကြမည်လုပ်တော့ ဝင်းတင်က “မျောက်ညို၊ မင်းခင်မောင်ထွန်းဆီ တခါလောက် သွားလည်ဖို့ကောင်းတယ်ကွ၊ သူ တော်တော် ချမ်းသာနေပြီလို့ ငါကြားတာပဲ” ဟု ဆိုသည်။ ဝင်းတင် အပြောကြောင့် အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝက ခပ်ညှိုးညှိုးမျက်နှာလေးနှင့် နေတတ်ခဲ့လေသော၊ ပိုက်ဆံရှိ မိန်းကလေးတယောက်အတွက် အတန်းရှေ့ထွက်ကာ မျက်ရည်တတွေတွေကျခဲ့ရဖူးလေသော.. ပြီး တော့ ကျနော့် အပေါ်တွယ်တာလွန်းလှသော လောကကြီး၏ ငယ်ဘဝပုံရိပ်ကို ပြန်မြင်နေမိသည်။ တွေးကြည့်တော့ သူချိန်းဆိုခဲ့ဖူးလေ သည့် ၁၉၉၅ လွတ်လပ်ရေးနေ့ပင် တဖြည်းဖြည်းနီးလာကောဟု သတိထားမိလိုက်၏။ အော် အနှစ် ၂ဝ ဆိုတာလည်း ဘာမှ မ ကြာသေးသလိုပါပဲလားလောကကြီးရေ။ ● လူ့လောကကြီးကပဲ ဆန်းကျယ်တာလား ကျနော့်သူငယ်ချင်းလောကကြီးကပဲ ဆန်းကျယ်သွားခဲ့လေ သည်လားတော့ ဝေခွဲမပြတတ် တော့။ထိုနေ့ မှတ်မှတ်ရရ သက္ကရာဇ် ၁၉၉၅ ပြည့် ဇန်နဝါရီ (၄) ရက်နေ့မနက် နှင်းတွေမကွဲမီမှာပင် ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှိရာသို့ ကျနော် တကယ်ပင် ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်သွားခဲ့ပါသည်။ မနက်ကိုးနာရီ မထိုးမီကပင် စောစောစီးစီးကြိုရောက်နှင့်ကာ ကျနော့်သူငယ်ချင်း လောကကြီးခေါ် ခင်မောင်ထွန်းကို စောင့်ဆိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တကယ်တော့ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂ဝ က ငယ်ရွယ်သူတို့၏ စိတ်ကူးယဉ်မှုသည် အသက်အရွယ် ရင့်ကျက် လာသည်နှင့်အမျှ အိပ်မက်ပုံ နှယ် တရေးနိုးအထတွင် ပျောက်ပြယ်သွားတတ်ကြသည် မဟုတ်လား။ ဒါကို ကျနော် မမြင်မတွေးနိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်။ သို့တိုင် ကျနော့် သူငယ်ချင်း၏ မျက်ရည်သီသီဝေ့နေလေသည့် ငယ်ဘဝရုပ်ပုံလွှာကို မြင်ယောင်မိတိုင်း ကျနော့်၏တွေးထင်မှုများက အလိုလိုပျယ်လွင့် မှေးမှိန်၍သာ သွားလေမြဲ။ထိုရက်မတိုင်မီတလလောက်ကလည်း ခင်မောင်ထွန်းကြီးပျင်းခဲ့ရာ မြောက်ဥက္ကလာပ၏ မြို့စွန်ကျကျ ရပ်ကွက်လေးသို့ ကျနော်ရောက် သွားခဲ့သေး၏။ မိတ်ဆွေစာရေးဆရာတယောက်၏ ကျန်းမာရေးသတင်းကိုမေးရင်း အားပေးစကားလည်းပြောရင်း ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ စိတ်ထဲတွင် ခင်မောင်ထွန်းတို့အိမ်အနားတဝိုက်ဟု ထင်မိသည်နှင့်မေးမြန်းကြည့်တော့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ပင် သွားတွေ့ သည်။ခင်မောင်ထွန်း ကျောင်းသားဘဝကနေခဲ့သည့် ယခင်အိမ်တော့မဟုတ်။ တထပ်တိုက်ပြားပြားလေးဖြစ်သွားပြီ။ သို့သော် သူ့ဖခင် လက် သမားဆရာကြီးကတော့ မရှိတော့ပြီ။ မိခင်ဖြစ်သူကတော့ သူ့သားသူငယ်ချင်းဖြစ်သည့် ကျနော့်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆက်ဆံရှာ သည်။ သူ့သားရောက်မလာတာကြာပြီဟုလည်း အလွမ်းသံ သဲ့ သဲ့နှင့်ဆို၏။ “သူက ဆရာဝန်ကြီး သူဌေးကြီးလေကွဲ့၊ အမေတို့ဆီ ခဏခဏဘယ်လာချင်ပါ့မလဲသားရဲ့၊ လာချင်ရင် အနီးလေး၊ မလာချင်ရင်သာ ခရီးဝေးတာမဟုတ်လား” ဟု မျက်ရည်စွက်လျက် ပြောသည်။ ရန်ကုန်တဖက်ကမ်းမှ သိပ်မဝေးလှသည့် ခင်မောင်ထွန်းရှိရာမြို့ကို ရည်ညွှန်းပြောခြင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ထိုညတွင် ကျနော်တို့ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘဝက ကျနော့်အော်တိုစာအုပ်လေးထဲမှာ သူရေးခဲ့သလို ၁၉၉၅ ဇန်နဝါရီ (၄) ရက်နေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် သူချိန်းဆိုရာဆီသုိ့ မပျက်မကွက်သွားစောင့်နေမည့်အကြောင်း သူ့အမေပေးလိုက်သည့်လိပ်စာကို တပ်ကာ ခင်မောင်ထွန်းဆီ စာတစောင်ရေးလိုက်သည်။ ငယ်ငယ်ကလို လွမ်းအားပိုတတ်သေးရင်တော့ လောကကြီးတယောက် မလွဲမသွေပေါက်ချလာမှာပဲဟု ကျနော်ထင်နေသည်။ ဒီ ကောင်လာမည်။ လောကကြီး ပေါက်ချလာမည်ဟု ကျနော်ယုံနေသည်။သို့သော်....ထိုနေ့ကမွန်းတည့်ချိန်ထိတိုင် ကျနော်စောင့်မျှော်နေခဲ့သော်လည်း ခင်မောင်ထွန်း ပေါ်မလာခဲ့။ တခုသော လွတ်လပ်ရေးနေ့၏ မွန်း တည့်နေရောင်အောက်မှာ ကျနော်သာ ခြောက်သွေ့နွမ်းလျစွာ လှည့် ပြန်လာခဲ့ရပါသည်။နှစ်ပရိစ္ဆေဒများကား အရာရာကို ပြောင်းလဲပြုပြင်စီရင်နိုင်တတ်လေသည့် သဘောပါတကား။ အော် လောကကြီးကား ဆန်းကျယ်လွန်း လှသည်ဟု ဆိုနိုင်လေမလား သူငယ်ချင်း။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမည်... ခင်လွန်းကျောက်ဖြစ်သွားတဲ့ .. နှင်းနိဂုံးပိုင်းခင်လွန်းSunday, January 24, 2010 စင်စစ် ကျနော်နှင့် ခင်မောင်ထွန်းတို့ အကြောင်း က ဒီမှာပင် နိဂုံးချုပ်သင့်သည်။ ငယ်စဉ်တုန်းက ကလေးကလားကိစ္စတွေ စိတ်ကူးယဉ်တွေ ထား လိုက်ပါတော့ဟု ပြောကောင်း ပြောနိုင်မည်ဖြစ် သည်။သို့သော် ပြဿနာက ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပင်။ ဘာ ဖြစ်လို့မှန်းမသိ၊ ကျနော့်စိတ်ထဲတွင် ခင်မောင် ထွန်းနှင့် အကြောင်းသည် တိုက်ဆိုင်မှု တခုခုနှင့် ကြုံရလေတိုင်း လွမ်းလွမ်းကြဉ်ကြဉ်ဖြစ်ကာ တ မြမြ ခံစားနေရဆဲ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ရက်များ တွင်ဆိုလျှင် ခင်မောင်ထွန်းကို ကျနော် သတိမရ မိဘဲမနေ။ ကျနော်ကိုယ်ကျနော် မရင့်ကျက် သေးသူဟုပင် ပြန်မြင်နေမိသည်။ လူတို့သည် အသက်အရွယ် ရလာကြသည့်အခါ တခုခုသော ကိစ္စရပ်အပေါ် တွေးမြင်ခံစားပုံ ပြောင်းလဲသွားတတ်လေသော်ငြား ကျနော့်မှာ ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘဝက ခင်မောင်ထွန်း တောင်း ခံခဲ့သည့် ကတိတခုကို ယခုအသက် ၄ဝ ဝန်းကျင်ရောက်သောအခါမှ ကျနော်မှာ ပို၍တလေးတနက် ခံစားနေမိသည်။ငယ်ဘဝစိတ်ကူးများကို အလေးထားမှုထက် ကတိဆိုသည့်စကားတွင် ကျနော့်မှာ လေးနက်နေမိခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ခင်မောင် ထွန်း က ဘယ်လိုစိတ်ကူးနှင့် လွတ်လပ်ရေးနေ့တနေ့ကို ချိန်းဆိုခဲ့မှန်းမသိသော်လည်း (သူက မှတ်ရလွယ်၍ဟုဆိုခဲ့သည်) ကျနော်က လွတ်လပ်ရေး၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပါ ယှဉ်တွဲခံစားနေမိခဲ့သည်။အကယ်၍ ခင်မောင်ထွန်းချိန်းဆိုခဲ့သော နေ့တနေ့သည် လွတ်လပ်ရေးနေ့မဟုတ်ခဲ့ပါက ကတိဆိုသော စကားလုံးပေါ်တွင်လည်း ဤ ၍ဤမျှ ကျနော်ခံစားနေခဲ့မည် ဟုတ်မဟုတ် မသေချာတော့။ထို့ကြောင့်ပင် ထိုနေ့ကို ကျနော့်ဘက်မှ ကတိရှိခဲ့သည့်အတိုင်း သွားခဲ့ပြီးပြီ။ ခင်မောင်ထွန်း ရောက်မလာခဲ့သော်လည်း ကိစ္စတခုပြီး သွားပြီဟု ကျနော်မထင်မိ။ ကတိဆိုသောစကားတလုံးက ရင်ထဲထိတိုင်ကျယ်လောင်စွာ ပဲ့တင်ဂယက်များထနေဆဲ။ ကျနော့်စိတ်မှာ မချင့်မရဲခံစားနေရဆဲ။ သူရောက်လာခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အပေါ် ကျနော် စိတ်ခုခြင်းကွက်ခြင်းမျိုး အလျဉ်းမဖြစ်ခဲ့။ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ဆိုသော အချိန်သည် လူတယောက်၏ဘဝကိုထားတော့၊ ခေတ်ရေစီးခေတ်သမိုင်းများကိုပင် တသွင်သွင် စီးဆင်းပြောင်းလဲသွားကြပြီ မဟုတ် ပေလား။သည်လိုနှင့် ထိုနှစ်၏မတ်လတနေ့တွင် ရန်ကုန်တဖက်ကမ်းမှ မိုင် ၃ဝ လောက်ကွာလှမ်းသည့် ကျနော့် သူငယ်ချင်းတိရစ္ဆာန် ဆရာဝန် ရှိရာမြို့ကလေးဆီသို့ ကျနော်အမှတ်မထင်ရောက်ဖြစ်သွားအောင် အခြေအနေတခု ဖန်လာခဲ့လေသည်။ကျနော်တို့မဂ္ဂဇင်း တာဝန်ခံအယ်ဒီတာက သူ့မွေးရပ်မြေသို့ ကိစ္စတခုနှင့်ပြန်စရာရှိသည်။ “မောင်ရင် လိုက်ခဲ့ပါလား၊ ကိုယ်တို့လက်ခုပ် ကုန်းဘက်လည်း သွားကြတာပေါ့” ဟုဆိုလာ၍ မြို့ပြ၏မွန်းကျပ်မှုများအကြား လက်ပမ်းကျချင်ချင်ဖြစ်နေသည့်ကျနော့်အတွက် အ ဆင်သင့်သွားခဲ့ရသည်။ ပို၍အဆင်သင့်ခဲ့လေသည်က ထိုမြို့လေးမှာ ကျနော့်သူငယ်ချင်း လောကကြီးရှိနေသည့် မြို့။မြို့ကလေးသို့ဆိုက်ရောက်သည့် ထိုနေ့ညနေခင်းလေးမှာပင် ကျနော်တယောက်ထဲ ခင်မောင်ထွန်းအိမ်ကိုရှာရန် ထွက်လာဖြစ်သည်။ ပင်လယ်နှင့်နီးသောအရပ်မို့ ပင်လယ်၏ရနံ့သည် မြို့ကလေးဆီ၌ပျံ့သင်းနေသည့်အပြင် လေညင်းသည်လည်း လတ်ဆတ်လွန်းလှ သည်ဟု ခံစားမိ၏။ အိမ်တိုင်းလိုလိုတွင် အုန်းလက်ဖားဖားများ လွှမ်းခြုံနေရာ တမြို့လုံးသည် စိမ်းမြလျက်။ကျနော့်သူငယ်ချင်း တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်၏အိမ်သည် ကျနော့်ကိုလွယ်လွယ်ကူ ဆိုက်ရောက်စေပါသည်။ သူ့ဂုဏ်သတင်းကား ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိလှသည်။ သူ့ဘဝအခြေအနေညွှန်းကိန်းကလည်း လမ်းမပေါ်ကကြည့်ရုံမျှနှင့်ပင် မှန်းဆနိုင်ပြီ။ ခြံဝန်းကျယ်ကြီးတခု အ လယ်တွင် သူ့ရိပ်မြုံတိုက်ဝါဝါကြီးက ထည်ဝါလှဘိ၏။ ဆင်ဝင်တွင် အမိုးကိုင်းတပ် အဖြူရောင်ပါဘလစ်ကာ ကားတစီးထိုးရပ်ထား သည်။“ဆရာရှိလိမ့်မယ်ဗျ၊ သူ့ကားရှိတယ်” ဟု ဆိုက္ကားဆရာလေးကပြောတော့ ရင်မှာ သိမ့်ခနဲလှိုက်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ဝေးကွာ လှမ်းခဲ့ပြီဖြစ်သည့် ငယ်သူငယ်ချင်းတယောက်နှင့် ဆုံတွေ့ရမည်မဟုတ်လား။“ ဘာကိစ္စ ရှိလို့လဲရှင့်”စိနတိုင်းသွေးနှောဟန်ရှိသည့် အသားဖြူဖြူအမျိုးသမီးတဦးက ဆင်ဝင်ပေါက်ရှေ့ရပ်နေသည့် ကျနော့် ကိုမေးသည်။ ကျနော် ကိုခင် မောင်ထွန်းနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါဟု ဖြေတော့ ထိုအမျိုးသမီးကအိမ်ဘက်သို့ခေါင်းကိုငဲ့ကာ ..“ဆရာရေ၊ ရှေ့မှာ ဧည့်သည်ရောက်နေတယ် ” ဟုဆိုကာ အိမ်တွင်းသို့ပြန်လှည့်ဝင်သွား၏။ခဏနေတော့ အထဲကနေ သူထွက်လာသည်။ ခင်မောင်ထွန်း၊ ကျနော့်သူငယ်ချင်း လောကကြီး။ သူ့ အကြည့်သူ့မျက်လုံးများက ခပ်ငယ်ငယ်ကနှင့် မယွင်းမခြား။ အနည်းငယ်ဝလာသည်မှအပ မမှတ်မိစရာတစက် လေးမှမရှိသည့်ငယ်ရုပ်။“ဘာ ဘာ ဘာကိစ္စ”သူက ခပ်အမ်းအမ်းအမူအရာနှင့်ကျနော့်ကို အကဲခပ်သလိုကြည့်ကာ မေး၏။“ သူငယ်ချင်း၊ ကိုယ်လေ မမှတ်မိဘူးလား၊ သေသေချာချာကြည့်ပါအုံး”ကျနော်က သူ့ကိုမချင့်မရဲဖြစ်ကာ ရင်းချာသည့်လူချင်းမှတ်မိလွယ်မည့် ကျနော့်မူဟန်နှင့် ဆိုလိုက်၏။သို့တိုင် သူဝေခွဲနိုင်ပုံမရ။ ခဏနေမှ ..“အော် .. သိ သိ သိပြီ မင်း မင်း မျောက်ပေါ”“ သေလိုက်ပါတော့ လောကကြီးရာ ကိုယ်မျောက်ပေါမဟုတ်ပါဘူး မျောက်ညိုလေ၊ ဘဖေငြိမ်းလေကွာ”ကျနော့်၏ဖက်လှဲတကင်းရှိလှသည့်ပြောပုံကြောင့် သူ့မျက်နှာအနေခက်သွားသလိုဖြစ်ရာမှ ..“ဝင်ပါ ဝင်ပါ အိမ်ထဲဝင်ပါ” ဟု ဆိုသည်။ သို့တိုင် သူ့အသံက မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးရာမှ ခက်ခဲလှစွာ လွင့်လာခဲ့ရသည့်နှယ် တိုး တိုးလျလျ။ဧည့်ခန်းဆက်တီတွေပေါ် ထိုင်ဖြစ်ကြတော့ ဧည့်ခန်းမလယ်တွင် ဘွဲ့ဝတ်စုံနှင့် လောကကြီး၏ဓာတ်ပုံကြီးက ကျွန်းသားဘောင်ခံလျက် တဖိတ်ဖိတ်တောက်ကာ ခန့်ညားထယ်ဝါနေသည်ကို သတိထားမိ၏။ အခြားဓာတ်ပုံများဆီ အကြည့်ရောက်တော့ စောစောက ကျနော့် ကိုထွက်မေးသည့်အမျိုးသမီးမှာ လောကကြီး၏ ချစ်မငြီးသည့် ဇနီးသည်ပေပါတကားဟု အသိရောက်၏။ အခြားဓာတ်ပုံများမှာတော့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှင့်အတူ သားနှင့်သမီးဟု ထင်ရသည့် ကလေးငယ် ၂ ဦးတို့စုလျက် ရိုက်ထားသည့်ပုံများ။ ခင်မောင်ထွန်း၏ ဘွဲ့ဝတ် စုံနှင့် ဓာတ်ပုံကြီးနှယ် တဖိတ်ဖိတ်လဲ့နေသည့် အခြားဓာတ်ပုံကြီး ၂ ပုံတွင်မူ သူ့ဇနီးကျော့ကျော့၏ မိဘများဖြစ်ပုံရသည့် စိနတိုင်းရုပ် သွင်အပြည့်ရှိ သက်ကြီးပိုင်းမောင်နှံနှစ်ဦးတို့၏ပုံ။ ဓာတ်ပုံကားချပ်ကြီးများအောက်တွင်ရှိသော မဟော်ဂနီသွေးထနေသည့် ကျွန်းစားပွဲ ပေါ်တွင်မူ တယ်လီဖုန်းနှင့် ပန်းအိုးတလုံးကိုယှဉ်တွဲထားသည်။ ခင်မောင်ထွန်းမှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော မိသားစုတခု၏အလည်ဗဟိုတွင် နေသားကျနေခဲ့ပြီဟု မှန်းရ၏။“ မင်း မင်း ကိစ္စရှိလို့လား မျောက် မျောက်၊ အဲ မင်းနံမည် အဲ ဟို ဘ ဘ ဘ”သူ ကျနော့်အမည်ကိုမေ့မေ့လျော့လျော့ဖြစ်နေကာ ပင်ကိုယ်ထစ်ရသည့်အထဲ အခက်တွေ့နေပုံရသည်။“ ကိုယ် ဘဖေငြိမ်းလေကွာ၊ မျောက်ညိုလေ ”“ အော် အေးအေး၊ ပြော ပြောကွာ သူငယ်ချင်း၊ မင်း မင်းကိစ္စ ”ခင်မောင်ထွန်းဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ကာ မှန်တာပြောရလျှင် ကျနော် တော်တော်စိတ်ညိုသွားသည်။ ကျနော့် အပေါ် သူ့မှာ စိမ်းစိမ်းစက် စက်နိုင်လှသည်ဟု ထင်မိ၏။ စကားပင် ဘယ်လိုဆက်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ရသည်။ ဒါပေမင့် ကျနော် စိတ်ကိုရှည်ရှည်ထားကာ ငယ်ဘဝ ငယ်အကြောင်းလေးတွေ တစချင်းပြန်ပြောရသည်။ မြောက်ဥက္ကလာပ အထက (၁) ကျောင်းတော်ကြီးမှအစချီကာ ကိုးတန်းဆယ် တန်း ကျနော်တို့ အတူနေခဲ့ကြပုံ ဆုံခဲ့ကြရပုံတွေကို ပြောပြရသည်။ ကျနော့်မှာ အတိတ်ကိုမေ့နေသူနှင့် ပြောဆိုနေရဘိသည့်အလား ဟု ဘာသာထင်နေမိသည်။“ငါ ငါ မှတ်မိပါတယ်၊ ငါက မင်း မင်း တမင်လာလည်တာလားလို့ သိ သိချင်လို့ပါ”“တမင်လာလည်တယ်ပဲဆိုပါတော့သူငယ်ချင်း၊ ငါ မင်းဆီ တလောက စာရေးသေးတယ်လေ၊ ရလား ”သူ ခဏတွေသွား၏၊ ပြီးမှ “ အော်..ကျော့ကျော့တော့ ပြောပြောတယ်ကွ၊ ငါ သိပ်မအားတာနဲ့ မ မ မဖတ်မိဘူး၊ အင်း ဆို ဆိုပါအုံး မင်းဘာတွေ ရေး ရေးထားလဲ ”သို့နှင့်ကျနော်က လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၂ဝ လောက်က အော်တိုစာအုပ်တွင် သူနှင့် ကျနော် အချိန်းအဆက်ပြုခဲ့သည့် အကြောင်းပြောပြဖြစ် သည်။ ထိုချိန်းဆိုမှုအတိုင်း ကျနော်ရောက်လာပါမည်ဟုလည်း ထိုစာတွင် ထည့်ရေး ထားသည်ကို ပြောပြဖြစ်သည်။ “ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ငယ်ငယ်တုန်းက စကားပေမယ့် စွဲနေတယ်ကွာ၊ ဒါကြောင့် မင်းကိုသွားစောင့်ခဲ့တာ”သူ ကျနော့်ကိုတွေတွေကြီးကြည့်နေသည်။ တော်တော်ကြာကြာအထိ ငေးငူကာကြည့်နေခဲ့သည်။ဧည့်ခန်းမျက်နှာကျက်ဆီမှ ပန်ကာသည် တဝှီးဝှီးမြည်ကာ လည်နေ၏။ ခင်မောင်ထွန်းသည် ဘာမှမဆို နိုင်သေး။ သူ့စိတ်အစဉ်သည် အတိတ်တနေရာသို့ရောက်ကာ ပန်ကာရဟတ်များနှယ် လည်နေပြီလားမဆိုနိုင်။အတန်ကြာတော့မှ သူ ပြောလာ၏။“အေးကွာ ငါ မင်း မင်းနဲ့ချိန်းထားတာ ရေးတေးတေး မှတ် မှတ်မိသလိုပဲ၊ စောရီးကွာ”သည့်နောက်မှာတော့ သူစကားတွေ ပြောသည်။ ကျနော့်အကြောင်း ကျနော့်အခြေအနေကိုလည်း မေးသည်။ အော် မင်းက တကယ်ပဲ စာရေးဆရာ ဖြစ်နေတာကိုး ဟုပြောတော့ ကျနော့်မှာ လိပ်ပြာမလုံလှ။ ကျနော်က စာရေးခြင်းထက် စာပေထုတ်ဝေးရေးလုပ်ငန်းမှာ သာ ပိုပြီးကျင်လည်ရသူ မဟုတ်လား။အိမ်ထောင်မကျသေးတာလည်း တမျိုးကောင်းတာပေါ့ကွာ ဟုဆိုတော့ ကျနော်ပြုံးနေလိုက်သည်။ထို့နောက်မှာတော့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း လောကကြီးသည် သူမြင်သည့်လောကကြီးအကြောင်းကို ပြောပါလေသည်။ ကျနော်က နား ထောင်သမားသက်သက်။ သူ တက္ကသိုလ်ကို ဆင်းဆင်းရဲရဲတက်ခဲ့ရပုံ ဘဝနာခဲ့ပုံတို့မှအစချီကာ နောက်ဆုံး တိမွေးကုဆရာဝန်တယောက် မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုး စားခဲ့ပုံတွေကို ပြောပြသည်။ သူ့လို ငယ်ဘဝက ဂုဏ်ဒြပ်မဲ့ခဲ့သူတယောက်အဖို့ အရာရာရှုံးနိမ့်ခဲ့ရမှုများအတွက် နိဂုံးချုပ်ချင်ပြီ၊ လူစေ့ တန်းစေ့မက ရှိချင်သည်။ ဂုဏ်ရှိလျှင် ဓနတို့ဥစ္စာတို့က အလိုလိုယှဉ်တွဲဖက်အဖြစ် နောက်မှပါလာမြဲဟု သူမြင်သည်။“ မင်းကိုပြောခဲ့သလို ခေတ်စနစ်ကြီးပြောင်းဖို့အထိက ငါလဲ မတတ်နိုင်ဘူး သူငယ်ချင်း ဒီတော့ ..” သူ တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်က ကျနော့်ဆီရေးသည့်စာများတွင် ခေတ်စနစ်ကြီးပြောင်းလဲပစ်ပါမှ ကျနော်တို့လို လူတန်းစားများလည်း မည်သည့်ပညာရေးကိုမဆို တန်းတူညီတူ တက်နိုင်မည်ဟု သူပြောဖူးခဲ့သည်။ ဒါကို သူ မှတ်မှတ်ရရပြန်ပြောခြင်းဖြစ်၍ ကျနော် ကျေ နပ်ရသည်။ထိုစဉ် ကားကြီးတစီးက သူ့ခြံထဲသို့ မောင်းဝင်လာခဲ့သည့်အတွက် စကားကိုခေတ္တဖြတ်ထား၏။ သူ ထိုင်ရာမှထကာ ကားပေါ်ပါလာ သူတွေနှင့် စကားစမြည်ပြောသည်။ညနေရီသည် အမှောင်ပျိုးစပြုလာပြီ။ နွေညနေခင်းဆိုသော်လည်း ပင်လယ်လေညင်းနုများက မြို့လေးဆီသို့ တိုးဝှေ့ဝင်လာနေကြရာ အေးအေးမြမြ။ အပြင်ကိုမြင်နေရသည့်ပြတင်းဝမှလှမ်းကြည့်လျှင် မိုးသားပြာပြာတွင် တိမ်ခိုးဖြူတို့ တအိအိမျောလွင့်နေကြ၏။ အိပ် တန်းပြန်ငှက်ကလေးများ လေဟုန်နှင့်အတူ စီးခိုပျံသန်းလာနေ ကြသည်။ကျနော်သည်လည်း အတိတ်ဆီသို့အတွေးများဆန့်တန်းကာ ခင်မောင်ထွန်းကို ပြန်မြင်နေမိသည်။ ထိုအတွေးထဲမှာတော့ ကထိန်ပဒေ သာပင်ကြေး ငွေ ၂ ကျပ်ကိုမပေးနိုင်၍ အတန်းပိုင်ဆရာမကို ပြန်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် လောကကြီး၏ပုံရိပ်ကို မြင်နေရ၏။“ဒီလိုပဲသူငယ်ချင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကများတော့ ကိုယ်ခွဲပြီးလုပ်နေရတယ်”သူဆိုလိုသည်ကိုကျနော်သိဖို့ စကားဆက်ပြန်သည်။ သူက တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်အဖြစ်သာမက ဇနီးဘက်က မိဘများပေးသည့် ဆန် စက်လုပ်ငန်းအပြင် ပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်းပွဲရုံတို့ကိုလည်း အာရုံစိုက်ရ၊ လယ်ဧကများစွာကိုလည်း အငှားချလုပ်ထားရတော့ စိတ်များသူ ဖြစ်နေရသည်။ အားလပ်သည်ဟူ၍ မရှိလှ။“မင်းလိုစိတ်ကူးယဉ်နေနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးက ငါ့မှာမရှိတော့ဘူးကွာ၊ ငါ့အလုပ်က ငါ့ဘဝပဲ၊ ဒါ အဓိကလေ၊ တကယ်တော့ လောကကြီးဟာ ကိုယ်ခူးမှကိုယ်ရတာကွ၊ ငါရတုန်းခူးမယ်၊ ခူးဖို့စိုက်မယ်၊ ခုဆို မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း ငါ့ဘဝက အားလုံးပြီးနေပြီ၊ ငွေကွာ၊ ဓနကွာ၊ ဂုဏ်ကွာ၊ ဇနီးမယားသားသမီးကွာ၊ နောက်ဆုံး ငါ့အမေကို သူတခါမှမနေဘူးတဲ့ အခြေအနေနဲ့ထားနိုင်ပြီကွာ၊ အိုရေးသေရေး မပူရ ဘူးကွာ။ ကိုင်း ဒါတွေထက် ဘာအရေးကြီးသေးလဲ”လောကကြီးက ပြောရှိန်ရလာပြီ။ စကားပင် ထစ်ငေါ့နေခြင်းမရှိတော့ဘဲ တသွင်သွင်စီးခဲ့ပြီ။ သူ့မျက်လုံး အစုံမှာလည်း စူးစူးလဲ့လဲ့ အ ရောင်တောက်နေသည်ဟု ထင်ရ၏။“လူဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝကို ပြည့်စုံနေဖို့ တောင့်တင်းနေဖို့က အဓိကသူငယ်ချင်းရ၊ ငါတို့မိဘများက ဆင်းရဲခဲ့တော့ ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းက လူတကာရဲ့နင်းဖတ် ဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား၊ ကိုယ့်ဘဝက အောက်တန်းကျနေတော့ ဟိုဟာအပြစ်မြင်၊ ဒီဟာ အပြစ်မြင်နဲ့ စွဲချက် တင်နေတာကိုးကွ ဟားဟား၊ လောကကြီးကပဲ မျက်နှာလိုက်နေတော့သလိုလို ခေတ်စနစ်ကြီးကပဲ ပျက်စီးနေတော့သလိုလို၊ ဒီလို ရမယ်ရှာကြတာလေ၊ တကယ်က ကိုယ့် ကိုယ်ကို အဲဒီ့နွံ့ထဲက တနည်းနည်းနဲ့ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားရမှာ၊ ခု ငါ့ဘဝကိုကြည့်သူငယ်ချင်း”သူက တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်တဦးအဖြစ်လည်း ဂုဏ်ဒြပ်ရှိနေသလို စက်ဆန်သူဋ္ဌေး၊ လယ်ပိုင်ရှင်ယာပိုင်ရှင်ကြီး၊ ပြီးတော့ ပွဲရုံလုပ်ငန်းက လည်းရှိသေး။ မြို့လေး၏ကိုးကွယ်ရာတန်ခိုးကြီးဘုရားတွင်လည်း ဘုရားဒါယိကာ။“မင်းတော့ ဘယ်လိုမြင်မယ်မသိဘူး၊ ကိုယ့်ဘဝက ပြီးနေပြီကွာ။ ဒါဟာ ဘဝရဲ့အန္တိမပဲလို့ဆိုဆို ကိုယ့်ဘဝက ပြီးနေပြီ၊ ကိုယ့်အတွက် တခြားအရာတွေအားလုံးက သိပ်လိုအပ်မယ်လို့ ငါတော့ မမြင်မိဘူး”သူ စကားကိုခေတ္တဖြတ်ကာ ပြတင်းဘက်ဆီကြည့်လျက် ထိုစကားကိုပင် လေးလေးတွဲ့တွဲ့ထပ်ဆိုသည်။“ကိုယ့်ဘဝရိပ်မြုံက ပြည့်စုံနေပြီကွာ၊ ငါ ကျေနပ်ပြီ၊ ငါဘာတွေ ထပ်ကြိုးစားနေရအုံးမှာလဲ၊ ပြီးသွားပြီ သူငယ်ချင်း ဒါပါပဲ”သူက စကားကိုနိဂုံးသတ်လိုက်သလိုပြောပြီး ကျနော့်ဆီ အကြည့်ရွေ့သည်။“မင်းလဲ ဘဝကိုတည်ဆောက်ပါသူငယ်ချင်း၊ ကိုယ်မနိုင်တဲ့ဟာတွေတွေးရင် လောကကြီးက လေးပင်လှပါတယ်ကွာ၊ ငါကြည့်ရတာ မင်းစိတ်က ငယ်ငယ်တုန်းကလို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ချင်တုန်းကိုး၊ ဒါကြောင့်လဲ မင်း ငါချိန်းတဲ့နေ့ကို သွားတာပေါ့၊ အင်း..ကျေးဇူးတော့ တင်တယ်ကွာ၊ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူး၊ ကတိတို့ဘာတို့ဆိုတာလဲ ပေးရမယ့်ဟာ တည်ရမယ့်ဟာမဟုတ်ရင် အလေးအနက်မထားစေချင်ဘူး၊ ငါ့ကိုမှမဆို လိုပါဘူး၊ အရာအားလုံး၊ ကိစ္စအားလုံး”သူက စကားကို တိခနဲဖြတ်၏။ ကျနော်တို့အကြည့်ချင်း ဆုံသည်။ ကျနော့်မှာ စကားများများပြောစရာ မရှိ။ ပြောချင်တာတခုကိုတော့ ပြုံးလျက်သာ ဆိုဖြစ်လိုက်၏။“အေးကွာ၊ ငါက မင်းချိန်းထားခဲ့တဲ့နေ့က လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်နေတော့ ခံစားမှုရှိတယ်လေ၊ ဒီအပေါ် အလေးအနက်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါ လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အပေါ် ငါ့ခံစားမှုပါသူငယ်ချင်း”ဧည့်ခန်းမီး ဖြတ်ခနဲလင်းလာ၏။ ညဦးပိုင်းသို့ရောက်လာပြီ။ ခင်မောင်ထွန်းလည်း သူ့စကားကိုအနား သတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ သူ့ရင်ထဲတွင် ပြော စရာတောင်ကျန်မည်မထင်တော့။ ရှိလည်းရှိတော့မည် မထင်တော့။စင်စစ် အားလုံးက ပြီးနေပြီ၊ ပြီးသွားခဲ့ပြီ။ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ကြာဝေးကွာနေခဲ့ရသည့် လောကကြီးခေါ် ခင်မောင်ထွန်းမှာလည်း သူ့ စကားအဆုံးမှာပင် ကျနော့်ရင်ထဲ၌အပြီးသတ်သွားခဲ့ပြီ။ သူက ပြည့်စုံခြင်းများနှင့်အပြီး သတ်ခဲ့သလို ကျနော်က ထိုပြည့်စုံခြင်းများ အပေါ် မေးခွန်းများစွာတင်ကျန်လျက် အပြီးသတ်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်၏။ထိုမေးခွန်းများက ခင်မောင်ထွန်းခေါ် ကျနော့်ငယ်သူငယ်ချင်း လောကကြီးပေါ်မှာတော့မဟုတ်။လူ့လောကကြီးတခုလုံးကို မေးကြည့်ချင်သည်။ ကမ္ဘာလောကကြီးကို မေးကြည့်ချင်သည်။ ပြည့်စုံခြင်း အပြီးသတ်ခြင်းဆိုသည်တို့၏ အဓိပ္ပာယ်များ။ လူတို့၏အန္တိမ နိဂုံးများ။ခင်မောင်ထွန်းအိမ်ကထွက်လာတော့ ပင်လယ်ကမ်းနီးမြို့ကလေးသည် လေထဲတွင် တရှဲရှဲမြည်နေသည့် အုန်းပင်ဖျားမှ ရွက်ခတ်သံတို့ အကြား နစ်ဝင်နေသလိုအောက်မေ့ရလေသည်။ ခင်လွန်း ည- ၈း ၅ဝ နာရီဇန်နဝါရီ(၁၂)ရက်၊၂ဝ၁ဝ(မြောက်ဥက္ကလာပ အထက(၁) ကျောင်းတော်ကြီးမှ ငယ်ဆရာဆရာမများနှင့် သူငယ်ချင်းများသို့ အမှတ်တရ) Summary only...
၂၀၁၀ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ် - မြန်မာပြက္ခဒိန်။
http://ifile.it/gbxauoz/25604860-2010-English-Myanmar-Calendar-Poems.pdf2010 English Myanmar Calendar Poems Summary only...
ဦးအောင်ဆန်းဦးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ(၂၄-၁-၂၀၁၀ )